Ziziphi iintlobo zabasetyhini bonke abantu abathanda ngazo?
Ziziphi iintlobo zabasetyhini bonke abantu abathanda ngazo? Yiyiphi ibhinqa ekhetha iyona nto yomeleleyo kweli hlabathi? Bonke abafazi bafanele bazi malunga nale nto, ukuze batshintshe into ngokwabo, ukuze bafumane ulonwabo.
Amadoda ayayithanda xa ibhinqa lingenayo inqatha. Abasetyhini abasuka ebhedeni baya kulala, abakhathalele ukuba ngaba batshatile okanye bengabani, abatsha okanye abadala. Ewe, unako ukubiza abafazi abanjalo ngokuhlukileyo, kodwa maxa-ke bahlale "nje". La mabhinqa aqaqambile, akhangayo kwaye ayenomdla kakhulu. Amadoda angachitha ixesha elaneleyo kunye nabo, kodwa abatshati. Ukuba ufuna ubuhlobo obungathandabuzekiyo kwaye akukho mnye ukuhlangabezana nokuguga, kwaye ekhanda lakho ucokola kuphela ngesondo - nqakraza kwiibhuleki uze ucinge ngezinto ozixabisayo.
Amadoda ayithandi abafazi abafuna kuphela isikhwama se-fat . Kwizigaba zokuqala zonxibelelwano, abafazi abanjalo baphenduka baba yi-rose rose kunye neendoda zonke ezinyaweni zakhe. Abafazi abanjalo bafana nesidlo se-candlelight dinner, bachaze ngothando, bavumele ngamazwi afundekileyo, kubo ubuhlobo obunzulu. Nokuba ilala lihlelwe kwakhona. Izaliswe ngothando kunye nephupha kwaye ngamanye amaxesha libala ukuba ubomi buzele izinto ezinzima. Oku kuya kuthandana de kubekiwe, kwaye ukuba kukho into engalunganga, loo mfazi uphendukela kwintombi ekhohlakeleyo.
Amadoda awayithandi ubunzima bobuqu. Unamandla kakhulu kwaye ngexesha elifanayo lungekho uhlobo olubi, apho amadoda adla ngokucinywa. Ekhaya kwintsapho - ibhinqa kunye negama lokugcina nje. Aba besetyhini bakholelwa ukuba kuphela kuphela abanokukwenza i-Earth Ball ibhukuse i-axis yayo. Uya kuwachoboza bonke endleleni. Ayinakucinga ngemibono yabanye, ihlala ihamba ngezidumbu. Indoda, ukuba unamandla okhuseleyo kunye neengqondi, ukuba ababuthathaka bangaba yinto ebuthakathaka, ulahlekelwe "nguYe" kwaye awunamsebenzi ngokupheleleyo.
Amadoda ayithandi "iigundane ezimpunga". Ezi "iigundane" zizolile, zingabonakali, zikulungele ukukhonza phambi kwabantu njengezithixo. Bavumelana nayo yonke into ngaphambili. Iimbono zala mabhinqa azinakunomdla ngokukhethekileyo, njalo i-poddaknet. Baya kuhlala bevuyiswa yilokho banako kwaye babulele umyeni ngokukhethwa. Ziyazidela, zitshintsha isithunzi sabo kwisimo seentsapho. Akuyena wonke umntu olungele ukuba ngumkhoboka. Ixesha lidlulayo, ucinga ukuba unokulahlekelwa isithixo sakho "imfumba imfucuza" ijika ibe yinto ekhohlakeleyo, ekwazi ukukhokelela ngokupheleleyo wakhe, akhe amazwi, ingcinga yakhe.
Amadoda ayithandi abafazi - abaqeqeshi. Uyakulangazelela phambili, uya ekhanda lakhe ukuze afumane isikhundla sakhe kwaye afumane isikhundla, kwaye intsapho ikhunjulwe kwaye iya kwimvelaphi. Kwaye wenza umsebenzi ongekho ngaso sonke isikhathi ngenxa yemali, kodwa engakumbi ngenxa yokwazisa kunye nokwaneliseka kweenjongo zakhe. Bafuna ukukhokelwa kwaye bahlale bephezulu. Kwaye ebhedini, loo mfazi unokuqala ukuthetha ngomsebenzi. Kodwa umyeni wam naye ufuna ukubonisa igunya lakhe, kumalungelo asekwe, kodwa kungekhona ngala mabhinqa. Kule meko, amadoda afikelela kumaqhekeza aqhelekileyo, afuna ukuphulaphulwa, atywe kwaye atshiswe. Abasetyhini, ningalokothi nibeke umsebenzi ngaphezu kwentsapho, mvumele loo mntu akwenze.
Amadoda ayithandi iinqwelokazi zekhephu. Kuhle kakhulu ngobuhle obuhle bowesifazane, onokukwazi ukuwa nothando nabani na, ngokufanelekileyo, ukunyusa ngokubanzi njengoko kuyimfuneko. Basebenzisa ngokulula ukulala ngesondo. Ezi zibala kakhulu abafazi. Abazi ukuba banike uthando, kodwa abazi nokuba banandipha njani uthando. La mabhinqa - iqhwa lithanda kuphela.
Le yimiba ephambili yabasetyhini. Ukuba abafazi kule nkcazo abafumani uhlobo lwabo - ngoko uyingxenye yabasetyhini abathanda bonke abantu!
Indlela yokuthanda nokwamkela ngokwakho?
UDaria Pynzar watsho ngokucacileyo malunga nempazamo enkulu emtshatweni wakhe
Ukucoca ubuso kumachaphaza amnyama
Isobho secoliflower puree
Burrito kunye nenkomo kunye neembotyi
Abantwana abatsha nabancinane kwintsapho
Izigqoko zasePrince 2008
Inzuzo kunye nenzakalo yesepha